New Zealand Cricket -ka ayaa si lama filaan ah u baajiyay socdaalkii Pakistan sababo la xiriira amniga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Sports » New Zealand Cricket -ka ayaa si lama filaan ah u baajiyay socdaalkii Pakistan sababo la xiriira amniga
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Pakistan War Deg Deg Ah • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Sports • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Guddiga Cricket -ka Pakistan (PCB) ayaa sheegay in booqashadan ay baajisay NZC “si kaligeed ah” in kasta oo “diyaarinta amniga nacasnimada ah” loo sameeyay taxanaha, kaas oo ka koobnaa saddex ciyaarood oo Hal Maalin ah oo caalami ah oo ka dhici lahaa Rawalpindi iyo shan T20s oo ku yaal magaalada bari ee Lahore.
Dalxiiska ayaa la joojiyay daqiiqado ka hor ciyaartii ugu horeysay ee kooxda New Zealand ee Pakistan muddo 18 sano ah.
Guddiyada Cricket -ka Pakistan iyo New Zealand ayaa sheegay in ciyaarta Rawalpindi loo baajiyay feejignaan dhanka amniga ah.
Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa la hadlay dhiggiisa New Zealand Jacinda Ardern jimcihii si uu ugu xaqiijiyo amniga kooxda.
Kooxda New Zealand ayaa lagu waday inay maanta la kulanto Pakistan kulankeedii ugu horreeyey ee ciidda Pakistan muddo 18 sano ah maanta oo ay ka dhici lahayd magaalada Rawalpindi, laakiin socdaalka ayaa la baajiyay ka hor bilowgii ciyaarta koowaad, sababo la xiriira 'walaac amni' oo aan la cayimin.
Garoonka Cricket -ka ee Rawalpindi
Cricket -ka New Zealand (NZC) - guddiga qaranka ee isboortiga - ayaa si lama filaan ah u soo saaray bayaan ay ku sheegayaan in ay "ka tanaasulayaan" socdaalka sababo la xiriira feejignaanta amniga dowladda daqiiqado ka hor bilowga ciyaarta oo la qorsheeyay.
“Ka dib markii ay sare u kacday heerarka hanjabaad ee Dowladda New Zealand ee Pakistan, iyo talo ka timid la -taliyayaasha amniga NZC ee dhulka, waxaa la go'aamiyay in Koofiyadaha Madow aysan sii socon doonin socdaalka, ”ayaa lagu yiri bayaanka Cricket -ka New Zealand.
“PCB -du waxay diyaar u tahay inay sii waddo ciyaaraha loo qorsheeyay,” ayaa lagu yiri bayaan PCB ah. "Si kastaba ha noqotee, kuwa jecel cricket -ka Pakistan iyo adduunka oo dhan way ka niyad jabi doonaan ka bixitaankan daqiiqaddan dambe."
Wasiirka warfaafinta Pakistan ayaa dhanka kale sheegay in ra’iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan uu la hadlay dhiggiisa New Zealand Jacinda Ardern jimcihii si uu ugu xaqiijiyo ammaanka kooxda.
Muddo yar ka hor, Ra'iisul Wasaare Imran Khan wuxuu la xiriiray Ra'iisul Wasaaraha New Zealand wuxuuna u xaqiijiyey in kooxda New Zealand la siinayo amni aan qarsooneyn Pakistan, PCB -na wuxuu sheegay in kooxda amniga New Zealand laftoodu ay muujiyeen inay ku qanacsan yihiin qabanqaabada amniga Pakistan, ”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Fawad Chaudhry.
"Hay'adahayaga sirdoonku waxay ka mid yihiin nidaamyada sirdoon ee ugu wanaagsan adduunka oo sida ay sheegaan kooxda New Zealand ma la kulmaan wax khatar ah."
Bayaan uu soo saaray, Madaxa Fulinta Cricket -ka New Zealand David White wuxuu ku sheegay in aysan macquul ahayn in lagu sii socdo socdaalka marka la eego talada amniga ee la siiyay.
NZC ayaa sidoo kale sheegay in la qabanqaabinayo in kooxda cricket -ka ragga New Zealand ay baxaan Pakistan.
Tallaabadan ayaa loo arki doonaa inay dhabar jab ku tahay dadaallada Guddiga Cricket -ka Pakistan oo ah in cricket -ka caalamiga ah oo buuxa lagu soo celiyo dhammaan kooxaha Pakistan, ka dib markii kooxda waddanka lagu qasbay inay musaafuris ku ciyaaraan muddo lix sano ah ka dib weerar 2008 lagu qaaday kooxda cricket -ka Sri Lanka. Lahore.
Su'aalaha ayaa weli taagan in kooxda ragga cricket -ka ragga ee England ay sii wadi doonaan qorshayaasha ay ku tagayaan Pakistan bisha soo socota.